ဟောငျးအိမျကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
2020 ခုနှစ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အများဆုံးအရေးတကြီးကိစ္စဖြစ်ပါသည် ဟောငျးအိမျကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ။ မြေတပြင်လုံး၏ပျမ်းမျှအသက် Taiwan အဟောင်းနှင့်အထက်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နေရောင်ထဲမှာနေ, လေနှင့်မိုးရွာရွာနှင့်ငလျင်ပေါင်းကျွန်း-type အမျိုးအစားတိုင်းပြည်များ၏ဘေးကြောင့်ထိခိုက်သောအခါ။ မကြာခဏတိုင်ဖွန်းနှင့်မကြာခဏငလျင်များအလှည့်ထဲမှာကြွပ်ကျကြစေရာ, အိမ်၏မျက်နှာပြင်မြင့်တက်ခြင်းနှင့် crack စေပါပြီ။ ၏ပစ္စုပ္ပန်မှာပြင်ရိုးကို Taiwan'' s ကိုဟောင်းများကိုအိမ်ခြေအဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုသာသက်ရောက်ပေမယ့်လည်းလူပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်သာမကထားတဲ့အုတ်ကျိုးပဲ့ပါပြီ။
အစောပိုင်းကာလများတွင်ဟောင်းအိမ်များတွင် Taiwan အဓိကအားဖြင့်နှစ်ဦးကိုကြွပ်တက်လုပ်ခဲ့ကြသည်များနှင့်ရာသီဥတု၏ရှည်လျားသောကာလပြီးနောက်ချွတ်ကွာ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုသည်အလွန်တိုးတက်ခဲ့သည်။ လမ်းသွားလမ်းလာများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုထိခိုက်ကြောင်းအလားတူသတင်းအဆုံးမဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟောငျးအိမ်သူအိမ်သားပိုင်ရှင်တွေအစိုးရကိုပြစ်ဒဏ်များယူရတယ်မသာ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းလူသွားလူဆေးဘက်ဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလျော်ကြေးငွေနှင့်အခြားရှုပျထှေးပြဿနာများပိတ်မိနေခံရခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။
မြင့်အိမ်ရာစျေးနှုန်းများခုနှစ်တွင်,အဟောင်းကိုအိမ်၏ဝယ်ယူများစွာသောလူများအတွက် option ကိုဖွစျနပွေီ,နှင့်အဟောင်းအိမ်များရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်အဟောင်းအိမ်များရှေးဟောင်းသုတေသနမှအထူးအရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.အဆိုပါစုဆောင်းအင်ဂျင်နီယာအတွေ့အကြုံကိုမှတဆင့်,ChengLin ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအဆက်မပြတ်အရည်အသွေးကိုအောင်မြင်ရန်ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းများညှိ.optimization,tile ကိုမျက်နှာပြင်နှင့်အတူအဟောင်းအဆောက်အဦးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ,အဆိုပါ tile ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများကြောင့်,အခြားပြုပြင်မှုများထံမှလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အခက်အခဲအတွက်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်ခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်.ယခင်တုန်းက,အဟောင်းကို-ခေတ်နည်းလမ်းလုပ်ငန်းများ၌ခံရရန်အုတ်လိုအပ်,အရာအပိုဆောင်းကုန်ကျမှု.အဆိုပါငြမ်း၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကုန်တင်၏ရှင်းလင်းခြင်းအပြင်,အုတ်ဖြိုဖျက်၏ကုန်ကျစရိတ်လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်,ထိုသို့လည်းရှည်လျားဆောက်လုပ်ရေးကာလနှင့်မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိပါတယ်.
ChengLin ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဂျပန်အစုတခုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်'အပြင်းထန်ဆုံးအသစ်နှင့်အကျိုးရှိစွာ့“ခေါက်-အခမဲ့ brickwork နည်းလမ်း”ထိုကဲ့သို့သောအုပ်ကြွပ်အဖြစ်အပြင်မြို့ရိုးကိုအဆောက်အဦးရဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံများအတွက်,tile ကိုကြွပ်,နှစ်-ဇာတ်လမ်းအုတ်နဲ့ mosaic အုပ်ကြွပ်.
အဆိုပါ“အခမဲ့အုတ်ဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်း”အဟောင်းကိုအုပ်ကြွပ်အထဲကခေါက်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး,အသွင်အပြင်မျက်နှာပြင်တဦးတည်းအားဖြင့် RC အလွှာတဦးတည်းထွက်ခေါက်နေသည်,ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချ,လူကိုချွေတာ-နာရီ,နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆူညံသံညစ်ညမ်းမဟုတ်,ပြင်ပမြို့ရိုးအဟောင်းများကိုဖြစ်နိုင်အောင်.အိမ်သူအိမ်သားများပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ,အဟောင်းကိုအိမ်၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ.
တစ်ဦးချင်းစီကို client အပေါ် အခြေခံ.'s ကိုဘတ်ဂျက်နှင့်ဦးစားပေး,ChengLin ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအရှိဆုံးအသေးစိတ်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထောက်ပံ့,အဟောင်းကိုအိမ်သူအိမ်သားပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံနည်းလမ်းများ၏အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြု.,နှင့်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဂျပန်နိပွန်မူပိုင်ခွင့်ကုတ်အင်္ကျီ,အထူးသဖြင့်ချွတ်ယွင်းဘိလပ်မြေမော်တာမျက်နှာပြင်များအတွက်,ကွန်ကရစ်.တစ်ခုချင်းစီကိုအိမ်ရှင်က 100 ဖြစ်နိုင်အောင်မည်သည့်ပစ္စည်း၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကိုကုသ%ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးရဲ့အရည်အသွေးနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ချက်ချင်း-အသစ်တစ်ခုကိုနေအိမ်သစ်ကို.
3)ကျနော်တို့ထောင့်ဆောက်လုပ်ရေးအပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် SOP လုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးစီရှိတယ်.
4)မြို့ရိုးအ SOP အချိန်ကြိတ်ထားသည်,Don စိတ်တော်'အဲဒီအကြောင်း t ကိုစိုးရိမ်ပူပန်.